Home Aragti-doon 8 nooc oo shaah ah oo u wanaagsan maskaxda
Shaaha madow ama cagaaran, illaa caleenta hibiscus iyo chamomile, waxay kaa celin karaa xanuuno, iyo maareynta cayilka iyo waxyaabo badan oo wanaagsan.
Waxaa ka mid ah Green Tea oo faa'idooyiin badan leh. UNSPLASH
Ma jeceshahay in Caleenta Cagaarka ah aad isku xoojiso marka aad soo toosto, ama in aad maskaxda ku dejisato koob shaah oo ah Chamomile, ka hor inta aadsan seexanin?
Shaaha looma cabo oo keli ah in firfircooni laga qaado, balse waxaa loo cabaa in laga helo faa’idooyiin cafimaad oo badan.
Niyadda ku hay in dhammaan cilmi-baarisyada aysan Shaaha u eegin sida cabitaan ahaan ama dareere ahaan; Baaritaannada qaar waxaa lagu adeegsaday kaniiniyo laga sameeyay caleenta, kuwana waxay eegeen caleenta naftigeeda inta ay geedka ku taallay.
Marka aad shah cabeyso, waxaad ka heleysaa faa’idooyiin caafimaad. Noocyo badan oo ka mid ah caleenta waxaa ka buuxo waxyaabo badan oo jirka iyo maskaxda faa’iido u leh.
Haddaba, hadda koob shah ah soo shubo, akhrina 8-da faa’iido ee aad ka heleyso:
Caleenta cagaaran waxay yareyn kartaa halista noocyo ka mid ah sokorta
“Green tea, oo ka sameysan dhirta Camellia, waxaa boqollaal sano loo adeegsanayay dawo ahaan, waxaana ka buuxo maadooyiin wanaagsan,” sida lagu xusay baaritaanno kala duwan.
Noocyada shaaha Cad, oolong, cagaar, iyo madowba, dhammaan waxay ka tirsan yihiin Green Tea; Waxay ku kala duwan yihiin dhadhanka iyo qaabka oo keli ah.
Cilmi-baaris ayaa lagu sheegay in maalintii illaa lix koob haddii aad ka cabto Green Tea, waxaa lala xiriiriyay in uu hoos u dhigayo illaa 33% halista sokorowga. Taas waxaa la barbardhigay dadka isbuucii hal koob ka caba.
Cilmi-baaris kale oo la daabacay, bishii August 2018, waxaa lagu ogaaday in caleentan ay daweyneyso xinjiraha xiri kara halbowleyaasha dhiigga, kuwaas oo dhibaato u geysan kara wadnaha.
Waxay sidoo kale caleentan yareysaa halista ah in qofka uu dhinac-qalalo (stroke), marka la barbardhigo qofka aanan cabinba.
Shaaha madow – Fahamka iyo yareynta xanuunka
Si la mid ah Shaaha cagaarka ah, caleenta madow waxay leedahay faa’idooyiin badan oo caafimaad. Cadeymo dhanka caafimaadka ah waxaa lagu ogaaday in Shaaha madow uu door madow ka ciyarayo ka hortagga in fahamka uu yaraado, wadne-xanuunka, sokorowga iyo noocyo ka mid ah kansarka.
Caleenta Madow waxaa ku jiro waxyaabo faa’iido ah oo dhirka kale ku jira, kuwaas oo yareyn kara halista kansarka.
Cilmi-baaris la daabacay 2019-kii, waxaa lagu ogaaday maadooyiinkaas ay yareyn karaan kansarka iyo xanuunada Wadnaha.
Oolong Tea – wuxuu isu dheellitiraa kalostoroolka caafimaadka leh
Weligaa ma cabtay Green tea? Haddana isku day caleenta oolong a. Waxay u wanaagsan tahay feejignaanta iyo in arrimaha aad ka shaqeyneyso si gaar ah diiradda u saaro, waxaana laga helaa nafaqooyiin.
Waxay u fiican tahay Wadnaha, sida lagu sheegay cilmi baaris lagu sameeyay 2010-kii. Haddii aad maalintii ka cabto illaa seddax koob, waxay kaa yareyneysaa dufanka lagu xanuunsado, waxayna sare u qaadeysaa kolestoroolka caafimaadka ah ee dhiigga.
Chamomile Tea – hurdada iyo hannaanka difaca
Haddii xilligii hurdada aad seexan waydo, hadaba ka fikir in aad cabto caleentan si maskaxda ay kugu degto oo aad u hurudo.
Waa caleen dawo-dhireed ahaan loo isticmaalo, mana lahan madooyiinka caffeine-ka ee dadka hurdo la’aanta dhiga. Waxaana laga helaa xasillooni dhanka maskaxda ah.
Cilmi-baaris ayaa lagu ogaaday in caleentan ay maskaxda aad ugu wanaagsan tahay, ayna yareyneyso walwalka.
Shaaha Sanjabiilka leh (Ginger Tea) – wuxuu yareeyaa lalabada iyo matagga
Caloosha maku xanuuneysaa oo ma lalabooneysa? Ma tahay gabar walac la xanuunsan? Haddaba isku day shaah shanjabiil leh. Waxaa lagu garanayaa yareynta dhibaatada dheef-shiidka iyo lalabada.
Cilmi-baaris la daabacay bishii march, 2016-kii, waxaa lagu ogaaday in sanjabiilka, oo ah xididka geed dawo ahaan loo adeegsanayay boqollaal sano, waxaa lagu daweeyaa matagga iyo lalabada.
Shaaha Reexaanta leh (Peppermint Tea) – waxaa lala xiriiriyay caafimaadka dheef-shiidka
Si la mid ah sanjabiilka, caleenta reexaanta waxay u wanaagsan tahay hannaanka Dheef-shiidka iyo caloosha.
Waxaa caleentan ku jiro maado loo garanayo menthol, taas oo caawineysa in xiidmaha ay nastaan, calooshana aysan dibirin.
Cilmi baaris ayaa lagu sheegay in reexaanta ay si wanaagsan u daweyn karto caloosha iyo xuubabkeeda. Sidoo kale waxaa la cabi karaa ka hor inta aadan seexanin, maadaama aysan lahayn maadooyiinka kafeega ee hurdo la’aanta keena.
Hibiscus Tea – waxay yareysaa dhiig-karka
Caleenta oo ka sameysan nooc ka mid ah ubaxa – waa mid la qalajiyay oo dhadhan wanaagsan leh, waxayna u wanaagsan tahay jirka iyo dhiigga.
Cilmi-baaris ayaa lagu ogaaday in cabidda shaaha hibiscus – haddii lix isbuuc oo joogto ah aad cabto – waxay si wanaagsan u yareyneysaa heerka dhiigga.
Waxay sidoo kale jartaa caloosha wayn, iyo sida aad cuntooyiinka u qaadaneyso oo wanaagsanaada – waa faa’idooyiin caafimaad.
Fennel Tea – waxay yareysaa xanuunka dhiigga caadada
Waa caleen kale oo u fiican caoosha! Waxay hagaajisaa murqaha caloosha, si aysan u xanuunin. Sidoo kale waxaa lagu aadaa suuliga.
Cilmi-baaris lagu daabacay Joornaalka Arabian Chemistry, bishii November 2016, waxaa lagu sheegay in caleenta fennel, oo muddo loo garanayay sida dhir dawo ah, in si guud loogu isticmaalo daweynta caloosha.
Taas waxay keeneysaa in dumarka ay ka yareyso xanuunka dhiigga caadada oo aad u daran, maadaama murqaha caloosha ay hagaajineyso, sida lagu sheegay baaritaan la sameeyay 2017-kii.
Previous articleWax ka ogow shanta dabeecad ee ugu waaweyn
Next articleKansarka beerka ku dhaca iyo cuntooyiinka halista ku ah